Freedom Uprising: အမျိုးသားညီလာခံအပေါ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ သဘောထား
အမျိုးသားညီလာခံအပေါ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ သဘောထား
၁။ စစ်မှန်သော ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရန် ဒီမိုကရေစီမူများအပေါ် အခြေခံသော နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ လိုအပ်ပေသည်။
အခြေခံဥပဒေဟူသည် . . .
၁။ နိုင်ငံတော်အား မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ဖွဲ့စည်းမည်၊
၂။ ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြု ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များအား မည်ကဲ့သို့ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီး
ကဏ္ဍအလိုက် တာဝန်များ မည်ကဲ့သို့ ခွဲဝေအပ်နှင်းမည်၊
၃။ မည်သည့်စံနစ်၊ မည်သည့်မူဝါဒများကို ခံယူကျင့်သုံးမည်၊
၄။ နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို မည်သို့ဖော်ဆောင်ဖြည့်ဆည်းပေးမည်၊
၅။ ပြည်သူတို့၏ ရပိုင်ခွင့်များ၊ ခံစားပိုင်ခွင့်များကို မည်သို့ အာမခံမည်၊
၆။ ပြည်သူတို့၏ တာဝန်များ မည်သို့ သတ်မှတ်မည်၊
၇။ အစိုးရ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို မည်သို့ကန့်သတ်မည်ဟူသော အချက်များကို
ပြည်သူနှင့်အစိုးရကြား ချုပ်ဆိုသည့် ပဋိညာဉ်စာတမ်း ဖြစ်ပေသည်။
ဤသည်ကို ပြည်သူတို့အနေဖြင့် လိုလိုလားလား၊ နှစ်ခြိုက်ဘ၀င်ကျရန်၊ အများစုကြီးထောက်ခံရန် လွန်စွာအရေးကြီးပေသည်။ သို့မှလည်း ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီအခြေခံများ ပီပြင်ခိုင်ခံ့ရန် အရေးကြီးသည်။
၂။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် စတင်တည်ထောင်စကတည်းကပင် အောက်ပါအချက်များကို ကြီးစွာ သတိထားခဲ့သည်။ "အများပြည်သူတို့၏ ဆန္ဒနှင့်ကိုက်ညီ၍ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများကို အာမခံသည့်၊ စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီအစိုးရ ဖြစ်ပေါ်လာ စေရန်" လည်းကောင်း၊ "နောင်ခေတ်အဆက်ဆက်၌လည်း မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြည်သူလူထုနှင့်အညီ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေး စံနစ် ထွန်းကား၍ တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ပြည်ထောင်စုကြီးအဖြစ် တည်ထွန်းစေရေးအတွက် အုတ်မြစ်ချရန်" လည်းကောင်း၊ ရည်ရွယ်ချက် များ ချမှတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း "ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ပြည်ထောင်စုကြီးအဖြစ် စီးပွားရေးအင်အား ခိုင်မာတောင့်တင်းစွာ ရပ်တည်နိုင်ရေးကို လိုလားသည့်အလျောက် ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု လုပ်ငန်းများကို လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဦးတည်မည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ မွေးရာပါအခွင့်အရေးများ ခံစားပြည့်ဝရေးနှင့် ပြည်ထောာင်စုကြီး တခုလုံး သာယာဝပြောရေးကို သဟဇာတဖြစ်စေမည့် မူများကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံး၍ ပြည်နယ်များ၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို ဖော်ထုတ်မည်" ဟူသော မူဝါဒသဘောထားများကို ချမှတ်ခဲ့ပေသည်။
၄။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့စဉ်ကလည်း "ဒီမိုကရေစီ ထူထောင်ရန်နည်းလမ်းမှာ ဒီမိုကရေစီကို ယုံကြည်သော၊ ဒီမိုကရေစီ စံနစ်ကို ကျင့်သုံးမည်ဟု ခံယူကြသော အခြားနိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံပြီး ဒီမိုကရေစီစံနစ်၏ အနှစ်သာရဖြစ်သော လူထုဆန္ဒကို ခံယူမည်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် ပြည်သူ လူထု၏ ဆန္ဒကို ချွင်းချက်မရှိ ယုံယုံကြည်ကြည် လက်ခံယူမည်ဖြစ်သည်။ အချုပ်အခြာအာဏာသည် ပြည်သူများ၌ တည်သည် ဟူသော ဒီမိုကရေစီ အခြေခံမူအရ ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒသည်သာလျှင် အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်ရပါမည်။" ဟု အတိအလင်း ကြေညာ ခဲ့ပေသည်။
၅။ တဖန် ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်းကို ထုတ်ပြန်ရာ၌လည်း အဓိကအားဖြင့် "နိုင်ငံတော်အာဏာသည် ပြည်သူလူထုထံမှ သက်ဆင်းစေရမည်" ဟုလည်းကောင်း၊ "နိုင်ငံတော်အာဏာ၏ မူလပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြသော ပြည်သူလူထုကြီး၏ လူမှုဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးသာယာရေးအတွက် သူတပါး၏ အကျိုးကို မထိခိုက်စေဘဲ စည်းကမ်းရှိစွာဖြင့် ဒီမိုကရေစီကို အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ရန် လည်းကောင်း၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံသားတိုင်းသည် လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်၊ တွေးခေါ်ခွင့်၊ ရေးသားဟောပြောခွင့်၊ စည်းရုံးခွင့်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်ခွင့်စသော အခြေခံပိုင်ခွင့်များ အပြည့်အ၀ ခံစားခွင့် ရှိစေရမည်။" ဟုလည်းကောင်း၊ "အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများကို ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ၌ အတိအလင်း အာမခံမည်၊ လူ့အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးထိခိုက်နစ်နာမှုများအတွက် အခြေခံဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ သို့တည်းမဟုတ် သီးခြားအထူးဥပဒေပြဋ္ဌာန်း၍ ဖြစ်စေ၊ တရားရုံးများ၌ တရားစွဲဆိုခွင့်ရရှိရန် ပြဋ္ဌာန်းမည်။" ဟုလည်းကောင်း၊ "ပြည်သူ့ လွှတ်တော်သည် ဥပဒေနှင့်အညီ၊ ပြည်သူဆန္ဒနှင့်အညီ ပေါ်ပေါက်တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ရကား၊ ဤပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ အချုပ်အခြာအာဏာ ကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်သည် အကြွင်းမဲ့ရှိစေရမည်။" ဟုလည်းကောင်း၊ "ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အားလုံး၏ အခွင့်အရေးတန်းတူမှုကို လက်ခံလျက် မည်သည့်လူမျိုးကိုမျှ အထူးအခွင့်အရေး မပေးရေးနှင့် လူမျိုးနွယ်၊ လူမျိုးစု အားလုံး၏ ခံစားထိုက်၊ ခံစားအပ်သော မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမျှ ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်မှု မပြုရေးကို ဦးတည်ရှေးရှုမည်။" ဟု လည်းကောင်း၊ "ပြည်ထောင်စုကြီးတည်တံခိုင်မြဲရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းသာယာရေး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံး သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတည်း ဟူသော ဒီမိုကရေစီလူ့ဘောင် အခြေခံအုတ်မြစ်ကြီး များကို အခိုင်အမာချနိုင်ရန်အလို့ငှာ ပင်လုံညီလာခံကဲ့သို့သော ပြည်ထောင်စုကြီး၏ အနာဂတ်ခရီးလမ်းညွှန်များကို ချမှတ်နိုင်မည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ၊ အမျိုးသားညှိနှိုင်းမှု ညီလာခံတရပ်ကို ခေါ်ယူကျင်းပမည်။" ဟုလည်းကောင်း မဆွကပင် ပြည်သူတို့အား ကတိက၀တ် ပြုခဲ့ပေသည်။
၆။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ အထက်ပါ ရည်မှန်းချက်များ၊ မိသားစုဝင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအပေါ် ထားရှိသော မူဝါဒ သဘောထားများ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်းခြင်း၏ ဦးတည်ချက်များနှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့အား ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည်များသည် ပါတီစွဲ၊ ၀ါဒစွဲ၊ ဂိုဏ်ကဏစွဲနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်စွဲများ ကင်းရှင်းသော၊ မည်သည့်ပယောဂမျှ မဖက်သော နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ ရေရှည်အကျိုးစီးပွား သက်သက်ကိုသာ ရှေးရှုခြင်းဖြစ်ပေသည်။ တနည်းအားဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ အပြုသဘော ရှေးရှုချက်နှင့် သန့်စင်သော စေတနာမှန်ပင် ဖြစ်ပေသည်။ အထူးသဖြင့် သမိုင်း၏ တောင်းဆိုချက်အရ နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအတွက် မွန်မြတ်သော အမျိုးသားရေးတာဝန်ကို ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ ဖြည့်ဆည်းဖော်ဆောင်ရန် တာဝန်ယူလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ အထက်ပါ ဒီမိုကရေစီသဘောထားများကို တိုင်းရင်းသားပြည်သူအများစုကြီးက လိုလားလက်ခံခဲ့ကြသည်။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အား တခဲနက် ထောက်ခံကာ ဆန္ဒမဲပေး၍ တာဝန်များ အပ်နှင်းခဲ့ကြပေသည်။
၇။ ဤသို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ရိုးသားဖြူစင်စွာ ရှေးရှုဖော်ဆောင်သွားရန် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ခဲ့သည့်နည်းတူ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ရယုခဲ့သော နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည်လည်း စစ်မှန်သော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကိုပင် ဖွဲ့စည်းရန် ဦးတည်သည်ဟု အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ပေသည်။
(က) "နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာအာဏာကို မလွှဲမရှောင်သာ၍ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်တိုင် နိုင်ငံတော်အာဏာကို မူလပိုင်ရှင် ဖြစ်သော ပြည်သူများလက်ဝယ်သို့ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းနှင့်အညီ မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန် ပြန်လည်အပ်နှင်းချင်သည်။" ဟု နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများတွင် "တပ်မတော်၏ မွန်မြတ်သောဆန္ဒ" အဖြစ် ဖော်ပြအသိပေးပေသည်။
(ခ) နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် ၂၇-၇-၉၀ ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၉၀) ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။ ယင်းကြေညာချက်တွင် "ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ (၃) တွင် လွှတ်တော်ကို မဲဆန္ဒနယ်များမှ ဤဥပဒေနှင့်အညီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်" ဟူ၍ ပြဋ္ဌာန်းပါရှိသည်။ ယင်းပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ လွှတ်တော်ခေါ်ယူဖွဲ့စည်းခြင်းကို နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ပေး မည်ဟုလည်းကောင်း၊ "ယနေ့ အခြေအနေတွင် ပြည်သူများက ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်သော ကိုယ်စားလှယ်များသည် အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲကြရန် တာဝန်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။" ဟုလည်းကောင်း ဖော်ပြခဲ့ပေသည်။
(ဂ) နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး (၁) က ၁၈-၁၀-၉၁ ရက်နေ့တွင် ကျွန်းချောင်းဓာတ်မြေသြဇာ စက်ရုံ၌ "အာဏာလွှဲပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အစီအစဉ်ကို န၀တ၏ ကြေညာချက် (၁/၉၀) တွင် အတိအလင်း ဖော်ပြထားကြောင်း၊ ခိုင်မာသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတရပ်ကို တိုင်ပင်ရေးဆွဲကြ၍ ပြည်သူကို တင်ပြအတည်ပြုချက် ရယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးသားညီလာခံ ခေါ်ယူရေးမှာ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ၏ တာဝန်ဖြစ်ပေသည်။ န၀တက လိုအပ်သည်များကို ပံ့ပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း။" ထပ်မံအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပေသေးသည်။
၈။ "တပ်မတော်၏ မွန်မြတ်သောဆန္ဒ" နှင့် အာဏာပိုင်များ၏ ပြောကြားချက်များအရ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့သည် စစ်မှန်သော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးကိုပင် အခိုင်အမာ ရှေးရှုသည်ဟု ယုံကြည်ရပေသည်။ အမျိုးသားညီလာခံခေါ်ယူရေးနှင့် အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်သည် နိုင်ငံရေးသဘောအရ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပီပြင်စွာ ဖော်ညွှန်းခဲ့ပေသည်။
၉။ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေး အစီအစဉ်သည် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ကြေညာချက် (၁/၉၀) မှ မြစ်ဖျား ခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် နိုင်ငံရေးပါတီများအား ယင်း၏ ကြေညာချက်ကို လိုက်နာမည် ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့သည်။ ယင်းကြေညာချက်သည် ယခုတိုင်တည်ဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်သူ အားလုံးသည် ယင်းကြေညာချက်ကို လေးစားလိုက်နာ အကောင်အထည်ဖော်သွားကြရန် ကြီးစွာ တာဝန်ရှိပေသည်။
၁၀။ ဤသို့ဖြင့် အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပရေးအတွက် အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို (၂၃-၆-၉၂) ရက်နေ့မှ (၁၀-၇-၉၂) ရက်နေ့များအတွင်း ကျင်းပခဲ့သည်ကို ဆွေးနွေးပွဲ၌ ဦးဆောင်ကျင်းပရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌက "မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ နေထိုင်လျက်ရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့ရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားများကို ညှိနှိုင်းရယူပြီး ခိုင်မာတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတရပ် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ယနေ့အခြေအနေမှာ ပြည်သူများက ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များဟာ အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲကြရန် တာဝန်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ကြောင်း။" ဟု လည်းကောင်း၊ "အမျိုးသားညီလာခံ ကျင်းပတဲ့အခါ ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ ဆွေးနွေးချက်များ အပေါ် ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရယူမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားရမယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းနဲ့ အညီပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ပြောလိုပါတယ်။" ဟုလည်းကောင်း ပြောကြားခဲ့ပေသည်။
အမျိုးသားညီလာခံအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ပကတိအခြေအနေများ
၁၁။ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ ကြေညာချက် (၁/၉၀) မှတပါး အခြားနည်းလမ်းမရှိ။ မလိုက်နာလျှင်မဖြစ် လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို နိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးသာမက ကမ္ဘာကိုပင် ကြေညာခဲ့ပေသည်။ သို့သော် အမျိုးသားညီလာခံ ကျင်းပရာတွင် ယင်းကြေညာချက် (၁/၉၀) ပါအတိုင်း လက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်မလာပေ။ ကြေညာချက် (၁/၉၀) တွင် အတိအလင်း ဖော်ပြထားသော အနိုင်ရပါတီများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ဖုံးအုပ်ခဲ့တော့သည်။
၁၂။ အမျိုးသားညီလာခံကို (၉-၁-၉၃) ရက်နေ့မှစ၍ ကျင်းပခဲ့သည်မှာ ယခုတိုင်မပြီးဆုံးသေးပါချေ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားပြု ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်များသည် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ ကြေညာ ချက် (၁/၉၀) ကို လေးစားစွာ လိုက်နာပြီး ညီလာခံသို့ စုံညီစွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြပေသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် ထိုသို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးရန် အထက်တွင် ဖော်ပြထားရှိသည့် မူဝါဒသဘောထားများအပေါ် ခိုင်မြဲစွာ ရပ်တည်ခဲ့သည်။ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအတွက် အခြေခံရမည့် အခြေခံမူများသတ်မှတ်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဆင့်ဆင့်သော အဖွဲ့ချုပ်၏ သဘောထားဆန္ဒများကို ရယူခဲ့သည်။ ယင်းကို ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်ပြီးမှ၊ ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး အကြေအလည် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးမှ စာတမ်းများကို ပြုစုခဲ့ပေသည်။
၁၃။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် ပြည်သူတို့အား ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည့် မူဝါဒသဘောထားများကို အစဉ် လေးစားသည်။ နိုင်ငံရေးသိက္ခာကို စောင့်ထိန်းသည်။ ထို့ကြောင့် သွေဖီခြင်း လုံးဝမပြုခဲ့ချေ။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ တင်ပြချက်များသည် ဒီမိုကရေစီမူဘောင်များအတွင်းမှ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကို ဦးထိပ်ထားသည်။ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ အပြုသဘောဖြင့် အကြံပြုတင်ပြခြင်းများသာဖြစ်သည်။ လူ့နိယာမသဘောတရားအတိုင်း ကွဲလွဲချက်များ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီက လမ်းကြောင်းပေးမှုများနှင့် ခြားနားချက်များ ရှိကောင်းရှိမည်။ ဤသည်မှာ ဆန့်ကျင်သည့် သဘော လုံးဝမဟုတ်ပေ။ ဒီမိုကရေစီမူများကို အလေးအနက်ထားခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည်။
၁၄။ အမျိုးသားညီလာခံတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ပကတိအခြေအနေများကို စေ့ငုံစွာ သုံးသပ်မည်ဆိုပါက မူလရည်ရွယ်ချက်များမှ တစတစ ကွဲလွဲလာခဲ့သည်ကို အထင်အရှား တွေ့ရှိရပေသည်။ အမျိုးသားညီလာခံ အောင်မြင်ရေးအတွက် မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက် သော ကိစ္စတရပ် ဖြစ်သည်။ ပုံစံများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပေသည်။
(က) ညီလာခံ၏ ဦးတည်ချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် လည်းကောင်း၊ ညီလာခံတွင်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ညှိနှိုင်းပြီးမှ ပြုစုခြင်းမရှိပေ။
(ခ) ညီလာခံကိုယ်စားလှယ် အချိုးအစားကို ကြည့်ပြန်သောအခါ ပြည်သူက ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်သည့် ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ညီလာခံကိုယ်စားလှယ် အားလုံး၏ (၁၅.၂၄) ရာခိုင်နှုန်းသာ ပါရှိသောကြောင့် အမျိုးသားညီလာခံ တွင် အမြဲထာဝစဉ် "အနည်းစု" သာ ဖြစ်နေသည်။
(ဂ) စာတမ်းများကို ပြုစုတင်ပြရာ၌ လွတ်လပ်မှုမရှိဘဲ အာဏာပိုင်များက စိစစ်ပြီး ပြင်ဆင်ပေးစေလိုသည်များကို ပြင်ဆင် ပေးရသည်။
(ဃ) ညီလာခံအတွင်း ဆွေးနွေးရာ၌ အချင်းချင်း အပြန်မလှန် ဖလှယ်ခွင့် (မရှိချေ) တင်ပြချက်များအပေါ် စိစစ်သုံးသပ်လျက် အသင့်မြတ်ဆုံးကို ညှိနှိုင်းရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် မရှိချေ။
(င) ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စိစစ်တင်ပြချက် အများအပြားကို ဥပေက္ခာပြုခဲ့သည်။
(စ) ဆွေးနွေးချမှတ်ရာ၌ အခြေခံမူများသာမက အသေးစိတ်များပါ ပါဝင်နေသည်။
(ဆ) အလှည့်ကျသဘာပတိအဖွဲ့ စာတမ်းများကို ခြံငုံသုံးသပ်ပြီး ထောက်ခံတင်ပြပေးရသည်။
(ဇ) ဘာသာရပ်တခုအပေါ် အပြည့်အစုံဆွေးနွေးခြင်း မပြုရသေးသည်များကိုပါ တပါတည်း ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည်များကို တွေ့ရှိရသည်။
(ဈ) ညီလာခံကျင်းပရာ၌ ၁၉၄၇ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေများ ရေးဆွဲစဉ်ကကဲ့သို့ အချိန်ဇယားသတ်မှတ်ချက် မရှိပေ။
၁၅။ တကယ့်စင်စစ် စစ်မှန်သော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်မည် ဆိုပါက ဒီမိုကရေစီမူများအပေါ် အခြေခံသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဖြစ်ရပေမည်။ အခြေခံမူများသည် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေးရာများ အကောင်အထည် ဖော်ရေးအတွက် အခြေခံရမည့် မူများသာ ဖြစ်ရပေမည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် ပြည်သူတို့၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်သော အားဖြင့် ဥပဒေအရ "တရားရုံးတော်တွင် တင်ပြတရားစွဲဆိုနိုင်ခွင့်ရှိရမည့် အခြေခံမူ (၃၅) ချက်ကိုလည်းကောင်း၊ တရားစွဲပိုင်ခွင့်မရှိသော ရည်မှန်းချက် (၉) ချက်ကိုလည်းကောင်း တင်ပြခဲ့ပေသည်။" ဤသဘောတရားကို လက်မခံခဲ့ပေ။
၁၆။ အမျိုးသားညီလာခံအတွင်း၌ သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ရှိနေကြောင်း၊ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၏ အင်္ဂါရပ်များနှင့် မကိုက်ညီသော အခြေခံမူများ ပါရှိနေကြောင်းများကို တွေ့ရှိရပေသည်။ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တွင် ပြည်သူက ရွေးကောက်တင်မြှောက် အာဏာအပ်နှင်းလိုက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်သာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းကြရသည်မှာ နိယာမတရားဖြစ်ပေသည်။ ဤသည်တို့ကို ပြေလည်အောင်၊ အများလက်ခံနိုင်အောင် စီစဉ်ရမည်ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပေသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်သာ အဖြေပေါ် လာပေမည်။ မြန်မာနှင့်ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် တင့်တယ်လျေက်ပတ်ပြီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ဖြစ်ပေါ်လာရေးကို မမှိတ်မသုန် ရည်မှန်း ရပေမည်။
၁၇။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် အမျိုးသားညီလာခံကို ကြိုဆိုသည်။ လိုလိုလားလား တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံမူများနှင့်အညီ ရေးဆွဲထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ပြန်ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နှင့်အညီ ညီလာခံကို ကျင်းပ အကောင်အထည်ဖော်သွားလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဤသို့ ဖြစ်မလာခဲ့ပေ။ ဤသည်ကို ပြည်သူတို့ကိုယ်တိုင် ရွေးကောက် တာဝန်အပ်နှင်းခြင်းခံရသော ပြည်သူကို တာဝန်ခံရသော အဖွဲ့အစည်းတရပ်အနေဖြင့် တာဝန်သိသိ ၀မ်းနည်းစွာ ထောက်ပြလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
၁၈။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားအရေး တနည်းအားဖြင့် အမျိုးသားရေးကို အစဉ် ဦးထိပ်ထားပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အစဉ်တစိုက်ခံယူခဲ့သည့် မူများမှာ . . .
(က) ပွင့်လင်းရိုးသားမှုနှင့် အပြန်အလှန် လေးစားလိုက်နာရေး၊
(ခ) တမျိုးသားလုံး ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး (၀ါ) တိုင်းရင်းသားများ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊
(ဂ) ငြိမ်းချမ်းချောမွေ့သောနည်းကို အသုံးပြုရေး၊
(ဃ) အာဃာတကင်းစင်သော အထွေထွေသဟဇာတဖြစ်မှုကို ရှေးရှုရေး၊
(စ) အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့်
(ဆ) အပြန်အလှန် နားလည်မှုရှိရေးတို့ပင် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများအပါအ၀င် ပါတီအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်သူများ လိုလားတောင့်တနေကြသော စစ်မှန်သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် အပြန်အလှန် ယုံကြည်လေးစားစွာဖြင့် စေတနာမှန်ထားပြီး အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ပေါ်လာစေရန် သက်ဆိုင်သူအားလုံး လက်တွဲဖော်ဆောင်သွားကြရန် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပေသည်။
၁၉။ အမျိုးသားညီလာခံကို ယခုအတိုင်း ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ဆိုပါက . . .
(က) အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊
(ခ) စစ်မှန်သော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရေး၊
(ဂ)အများပြည်သူတို့ ယုံကြည်လက်ခံနိုင်သော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတရပ် ပေါ်ထွန်းရေးများကို အထောက်အကူ ပြုနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် အထက်ပါရည်မှန်းချက်များ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခြင်း ဖြင့်သာ အဖြေရှာနိုင်မည်ဟု ခိုင်မာစွာ ယုံကြည်ပေသည်။
၁၃၅၇ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း (၁) ရက်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်။
(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်း (ယာယီ) နှင့် မူဝါဒသဘောထားများ (မူကြမ်း)၊
၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ။ (စာမျက်နှာ - ၂)
(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်း (ယာယီ) နှင့် မူဝါဒသဘောထားများ (မူကြမ်း)၊
(၃) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်း (ယာယီ) နှင့် မူဝါဒသဘောထားများ (မူကြမ်း)၊
၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ။ (စာမျက်နှာ - ၁၂)
(၄) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကြေညာချက်အမှတ် (၃၀) – (၂၅-၉-၈၉)။ (စာမျက်နှာ - ၂)
(၅) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်း (၆-၁၁-၈၉)။ (စာမျက်နှာ - ၂)
(၆) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်း (၆-၁၁-၈၉)။ (စာမျက်နှာ - ၃)
(၇) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်း (၆-၁၁-၈၉)။ (စာမျက်နှာ - ၃)
(၈) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်း (၆-၁၁-၈၉)။ (စာမျက်နှာ - ၄)
(၉) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်း (၆-၁၁-၈၉)။ (စာမျက်နှာ - ၁၆)
(၁၀) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်း (၆-၁၁-၈၉)။ (စာမျက်နှာ - ၁၆)
(၁၁) နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၉၀) - ၂၇-၇-၉၀။ (အပိုဒ် - ၁၂)
(၁၂) နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၉၀) - ၂၇-၇-၉၀။ (အပိုဒ် - ၂၀)
(၁၃) အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲစာအုပ် - ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ။ (စာမျက်နှာ - ၂၁)
(၁၄) အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲစာအုပ် - ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ။ (စာမျက်နှာ - ၁၂၄၊ ၁၂၅)
(၁၅) အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ၊ အတွဲ (၂)၊ ၇-၆-၉၃ မှ ၁၆-၉-၉၃။
(စာမျက်နှာ - ၁၃၅ မှ ၁၄၂ နှင့် စာမျက်နှာ် ၄၄၈ မှ ၄၅၅)
Posted by freeburma at 2:04 PM
Labels: NLD's Standing